वर्णन मिडिया यात्रुलाई सस्तोमै हवाई टिकट दिनथालेपछि किन असन्तुष्टि ? - वर्णन मिडिया
यात्रुलाई सस्तोमै हवाई टिकट दिनथालेपछि किन असन्तुष्टि ?
२३-माघ-२०७६ | ०९:३३:०७ pm
खाली जहाज उडाउन नपरोस थोरै भएपनि व्यवसाय चलिरहोस सर्वसाधारणले पनि सर्वशुलभ मूल्यमा हवाई यात्रा गर्न पाउन भनेर बेलाबेलामा विभिन्न वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुले टिकटमा विभिन्न छुट तथा अफरहरुको योजना ल्याउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । यसबाट पछिल्लो समयमा नेपालमा सामान्य वर्गको मानिसले पनि हवाई यात्रा गर्न पाएका छन् ।
तर सरकारले अब सस्तोमा हवाई टिकट बेच्ने वायुसेवा कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउन भन्दै सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम भाडादरको सिलिङ तोक्ने भएको हो। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ बनाएको छ । यो नीति अहिलेकै अवस्थामा पारित भए विमान कम्पनीहरुले तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैनन् । यसबाट विभिन्न कम्पनीहरुले बनाएका स्कीम तथा व्यावसायिक योजना प्रभावित बन्नेछन् ।
तर सरकारको यस कार्यलाई भने नीजि वायुसेवा कम्पनीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले नीजि कम्पनीहरुको हवाई भाडादर सरकारले नै तोदिनु उचित नभएको बताएका छन् । विश्वव्यापीकरणको पछिल्लो समयमा नीजि कम्पनीहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन सक्षम भएका उनीहरुको भनाई छ । काठमाडौंबाट पोखराको भाडा सरकारले अधिकतम ५ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ । विभिन्न कम्पनीले आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण औसत ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँमा नै यात्रा गराइरहेका छन् । श्री एयरलाइन्सले शुक्रबारदेखी २ हजार रुपैयाँमै पोखरा रुटमा उडान गर्दैछ ।
प्रस्तावित नीतिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकी प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ, तर, यस्तो सीमा तोक्नुअघि वायुसेवाहरुको प्रतिनिधि संस्थासँग समेत समन्वय गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले तोकेको हवाई भाडा लागू नगर्ने कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानूनी कारवाही गर्न सक्ने नियम समेत प्रस्ताव गरिएको छ । बेमौसममा तोकिएको भाडादरमा यात्रु नै नपाउने गरेको अवस्थामा पनि वायुसेवा कम्पनीले अब सस्तो टिकट बनाएर पनि यात्रु उडाउन नपाउने भएका छन् । सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित नीतिलाई सच्याउन वायुसेवा कम्पनीहरुले माग गरेका छन् ।
सररकारले ल्याउन लागेको हवाई नीति पारित भएमा घाटामा गइरहेका वायु सेवा कम्पनीहरु विलिन भएर जानुभन्दा एकआपसमा गाभिएर वा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएर सञ्चालन हुन सक्नेछन् । वायुसेवा कम्पनीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्नेछ यद्यपी सरकारले नीतिबारेमा नीजि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसंग पनि समन्वय गरेर अगाडी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हाल नेपालमा १९ वटा वायु सेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नेपाल वायु सेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत गर्दै आएका छन् ।